ပိတ်ဆို့ခံထားရသည့် မာရီဥပိုလ်မြို့မှ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ကယ်ထုတ်ခဲ့ဟု ရုရှားရော ယူကရိန်းပါ နှစ်ဖက်လုံး အတည်ပြု - Xinhua News Agency
ယူကရိန်းနိုင်ငံ မာရီဥပိုလ် ဆိပ်ကမ်းမြို့ရှိ Azovstal သံမဏိစက်ရုံအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မော်စကို/ကိဗ် ၊ မေ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရသည့် ယူကရိန်းနိုင်ငံ မာရီဥပိုလ်ဆိပ်ကမ်းမြို့မှ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ကယ်ထုတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ရုရှားစစ်တပ်ရော ယူကရိန်းစစ်တပ်ပါ နှစ်ဖက်စလုံးက အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။သို့သော် လူအရေအတွက် အတိအကျကွဲလွဲချက် နှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သီးခြား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မေ ၂ ရက်တွင် ပြောကြားချက်အရ ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်ကျော်က မာရီဥပိုလ်မြို့အနီးရှိ လူနေအိမ်များနှင့် Azovstal သံမဏိစက်ရုံအတွင်းပိတ်မိနေသူများအနက် လူပေါင်း ၁၂၆ ဦးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မေ ၁ ရက်တွင် Azovstal စက်ရုံမှ လူ ၂၁ ဦးထွက်ခွာခဲ့ကြောင်းနှင့် အခြား ၂၅ ဦးမှာ အနီးအနားရှိ နေအိမ်များမှ ထွက်ခွာခဲ့ကြောင်း ၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် Donetsk ၌ ဆက်လက် နေထိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
မေ ၂ ရက်တွင် Azovstal စက်ရုံမှ အရပ်သား ၈၀ ကျော်ကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူ ယာယီနေရာထိုင်ခင်း နှင့် ဆေးဝါးကုသမှု အကူအညီများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အရပ်သား ၁၁ ဦးသည် Donetsk မြို့၌ ဆက်လက်နေထိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကျန်သူများမှာမူ ယူကရိန်း(ကိဗ်)ထိန်းချုပ်မှုအောက် ပိုင်နက်နယ်မြေဆီသို့ ဦးတည်သွားရောက်လိုကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
အဆိုပါ အရပ်သားများကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီတို့မှ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ မော်တော်ယာဉ်တန်းသည် ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ တောင်ပိုင်းမြို့ Zaporizhzhia မြို့ဆီ ဦးတည်ထွက်ခွာသွားကြကြောင်း သိရသည်။
သို့သော်လည်း ယူကရိန်းနိုင်ငံ စစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမူ မာရီဥပိုလ်မှ ထွက်ခွာလာသူ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သည် ယူကရိန်းထိန်းချုပ်ရာတောင်ပိုင်းမြို့ Zaporizhzhia မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကြောင်း မေ ၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Zaporizhzhia မြို့၌ လာရောက်ခိုလှုံသူများအားလုံးအနေဖြင့် ပူနွေးသောအစားအစာများ ၊ အစားအသောက်ထည့်ထားသော အိတ်များ နှင့် ဆေးဝါးများကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ယူကရိန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ စစ်ဉပဒေစိုးမိုးရေးဌာန က Facebook လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ပိတ်မိနေသူများ ကယ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို မေ ၂ ရက်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ယူကရိန်းဘက်က ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။(Xinhua)
Both Russian & Ukrainian militaries say more than 100 people were evacuated from besieged city of Mariupol in Ukraine
MOSCOW/KIEV, May2(Xinhua) — Both the Russian and Ukrainian militaries say more than 100 people were evacuated from the besieged city of Mariupol in Ukraine but differ on the exact number and other details.
On Sunday, 80 more civilians were evacuated from the Azovstal plant and were provided with board, lodging and medical aid. The ministry said that 11 civilians decided to stay in Donetsk, and the remaining wanted to head to territory under Kiev’s control.
According to the ministry, the civilians were handed over to representatives of the United Nations and the International Committee of the Red Cross. Their convoy departed for Ukraine’s southern city of Zaporizhzhia.
However, Ukraine’s military police said on Monday that more than 100 people evacuated from Mariupol arrived in the Ukrainian-controlled southern city of Zaporizhzhia.
တရုတ်နိုင်ငံ ဆန်ရှီးပြည်နယ်ရှိ သတ္တုတူးဖော်ရေးမြို့၌ ဂေဟစနစ်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့